Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPedro
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngeTV enescreen esisicaba kunye namajelo esatellite. Iitawuli kunye nelinen yokulala zinikezelwa. I-Intanethi kunye neendawo zokupaka simahla kwipropathi. Inegumbi lemidlalo elinesnooker kunye neping pong.
Iqula lokuqubha langaphandle.
Ikhaya leholide uQuinta da Galeira. I-Quinta da Galeira ibekwe ePinhão kwiNgingqi yaseNorte, iikhilomitha ezingama-40 ukusuka eVila Real. Ibonisa ichibi langaphandle kunye nemibono yeentaba. IPeso da Régua ikumgama oziikhilomitha ezingama-26. I-Wi-Fi yasimahla kunye nendawo yokupaka yabucala yasimahla iyafumaneka kwisiza.
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngeTV enescreen esisicaba kunye namajelo esatellite. Ezinye iiyunithi zinesimo somoya kunye nendawo yokuhlala kunye / okanye indawo yokutyela. Kukho ikhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya kunye ne-oveni. I-microwave, itoaster, ifriji kunye nomatshini wekofu ziyafumaneka. Kuzo zonke iiyunithi kukho igumbi lokuhlambela labucala elinebhafu. Iitawuli kunye nelinen yokulala zinikezelwa.
IMondim de Basto ikumgama oziikhilomitha ezingama-42 ukusuka eQuinta da Galeira, ngelixa iLamego ikumgama oziikhilomitha ezingama-25.
Wamkelekile kuQuinta da Galeira!!
Le ndlu inamagumbi ama-2 aneen-suite zokuhlambela, kunye negumbi eli-1 elinendlu yangasese eyahlukileyo. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinamagumbi okuhlala ama-2.
Iindwendwe zethu nazo zingabala kunye nenethiwekhi ye-WI-Fi, igumbi le-snooker kunye nedama lokuqubha.
Ngezithethe zehlabathi kwimveliso yePort Wine, iQuinta da Galeira ikunika ithuba elikhethekileyo lokuba neeholide zakho ngasese kwaye ujabulele ukhenketho lwewayini.
INgingqi yaseDouro Wine, ePortugal, iSiza se-UNESCO seLifa leMveli apho iwayini iye yaveliswa iminyaka engama-2000 kunye nomzekelo obalaseleyo wokuveliswa kwewayini yaseYuropu.
Sinikezela ngomgangatho ophezulu wokuhoywa komntu kunye nokugqwesa kwiinkonzo zethu ukunika amava angenakulibaleka. Sinikezela ngendawo, imfihlo, imvisiswano, inkonzo yobuqu kunye nethuba lokuthetha nobuhle obuphefumlayo bukaDouro.
Ucango lwendlu yethu luvulekile ukwamkela abantu abavela kwiimbombo ezahlukeneyo zehlabathi kusapho kunye nabahlobo.
Isetyenziswa nini nodwa phandle ilingana neyeOlimpiki ipuli
Isimahla umatshini wokomisa iimpahla
4.81 ·Izimvo eziyi-36
Umbuki zindwendwe ngu- Pedro
Inombolo yomthetho: 100406/AL
Iilwimi: English, Polski, Português, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pinhão